Ministri oru ugbo na oke ohia nke inye ndi oru ego | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMinistri oru ugbo na oke ohia gha goro ndi oru ha
Oru ndi oru ugbo na oke ohia inye ndi oru aka
Ministri nke oru ugbo na oke ohia eweputala ọkwa ohuru nke onye obula. Dabere na ọkwa a bipụtara site na DPB, Ministrị Ọrụ Ugbo na Oke Ọhịa ga-ewe ndị ọrụ 25 ọrụ site na 09 ruo na Nọvemba na 2019 ruo December 9.
Ka ndi ulo oru aka oru ahihia na oke ohia gha aru oru, Ngalaba Nhazi data, dabere na ihe Annex 375 nke Iwu Iwu No. 6 ma dabere na edemede a, Söz Nkwekorita Ozi Na Scaz Information informal nke ulo oru ndi oha na ndi otu edeputara na akwukwo nke Gazette dere 31.12.2008 na onu ogugu 27097. N'ikwekọ na edemede 8 nke Regulation na cipleskpụrụ na Usoro maka Ọrụ nke Personnel, 9 (itoolu) nkwekọrịta IT Personnel ga-eweghachite site na ebe a ga-arụ dị ka ihe ịga nke ọma nke nyocha ederede edere nke Ozi anyị.
a) Iji mezuo ọnọdụ edepụtara na Article 657 nke Civil Servants Iwu Nke 48,
b) Ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji afọ anọ, injinịa ngwanrọ, injinia, elektrọnik, ọkụ eletriki na ngalaba ọrụ injinia nke ngalaba ikike ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị elu nke ndị Kọmitii Na-ahụ Maka Mmụta Kasị Elu na-anabata nha anya ha.
c) (b) ndị ọzọ akọwapụtara na ngalaba agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ afọ anọ nke ngalaba injinia, ikike nke sayensị na akwụkwọ, agụmakwụkwọ na sayensị, ngalaba agụmakwụkwọ na teknụzụ, ọnụ ọgụgụ, mgbakọ na mwepụ na physics, ma ọ bụ nha anya na kọleji agụmakwụkwọ ndị a nabatara na mba ọzọ. (Ndị gụsịrị akwụkwọ na ngalaba a nwere ike itinye akwụkwọ maka 2 ala nke ụgwọ nkwekọrịta ụgwọ ọnwa kwa ọnwa)
ç) Nwere afọ 3 (atọ) nke ahụmịhe ọkachamara na ngwanrọ, imewe ngwanrọ na mmepe na njikwa nke usoro a ma ọ bụ na ntinye na njikwa nke sistemụ nrụọrụ nnukwu, maka ọ dịkarịa ala 5 (afọ atọ), na maka ndị ọzọ ọ dịkarịa ala 657 (afọ ise) nke ahụmịhe ọkachamara. Na-ekpebi ahụmịhe ahụ, dị ka onye ọrụ IT, ọrụ dị n'okpuru Iwu Nke 4 ma ọ bụ ọrụ nkwekọrịta dabere na Iwu Iwu 399 na ntinye edemede (B) nke edemede XNUMX nke otu Iwu ahụ na oge ọrụ ahụ edere dị ka ndị ọrụ IT na ngalaba nkeonwe nọ na ntinye aka na Nlekọta Ọrụ Mmezi nke Social Security.
d) Inye ihe omuma banyere ngwanro nke komputa ihe komputa na njikwa netwoki na nchedo, na-ede na ha maara ma o nwere ihe abuo n’ime asusu mmemme di ugbu a.
e) Maka ụmụ nwoke ndị nwoke, ọ bụrụ na ha erughi afọ ọrụ ndị agha ma ọ bụ na ha ruru afọ ije ozi agha, ha ga-abụrịrịrịrị ọrụ agha ma ọ bụ hapụ ma ọ bụ yigharị ma ọ bụ zigara ha na klas.
AK APKỌ AP ANDTA NA AKISTKỌ
2- Admissions a ga-eme na paswọọdụ e-ọchịchị na-aga ime (na www.turkiye.gov.t) akaụntụ bụ obligatory. Ndị ga-eme ntuli aka ga-enwerịrị paswọọdụ e-Government iji jiri akaụntụ a. Ndi umu akwukwo nwere ike nweta envelopu nke nwere paswọọdụ e-Government si n’aka PTT Central Directorate n’onwe ha site n’iwepụta kaadị njirimara ya na nọmba njirimara ndị Turkey na ya.
AKWOCKWỌ OBODO NA-AKW FORKWỌ AK ;KỌ;
a) Usoro Vitae, (CV Short nke onye chọrọ ime ihe a ga-akwadebe dị ka otu ibe, a ga-ebugo ya na 'Ozi ndị ọzọ' n'oge ngwa gọọmentị.)
b) A na-ekenye akwụkwọ Ọrụ SSI, (peeji nke SSI na Akwụkwọ Ọrụ Ndị Ọrụ, akwụkwọ ndekọ aha, ngwa gọọmentị n'oge ngalaba 'Ozi ndị ọzọ').
c) Akwụkwọ nke na-egosi ahụmịhe ọkachamara akọwapụtara na Nkeji edemede 3 (3) nke Ọnọdụ General (Ọ dị mkpa iji gosipụta na a na-enyefe ahụmịhe ọkachamara ahụ dịka ndị ọrụ ozi, a ga-ebugo ya na ngalaba 'Ozi ndị ọzọ' n'oge ngwa emere site na gọọmentị.)
d) Akwụkwọ edemede ahụ na-ekwupụta na ọ maara ma ọ dịkarịa ala asụsụ mmemme abụọ dị ugbu a akọwapụtara na (d) nke aha ọnọdụ izugbe (transcript na-egosi ma ọ dịkarịa ala usoro mmemme semester 2, iwere, ntinye / akwụkwọ ule wdg.) a ga-edunye ya na ngalaba 'Ozi ndị ọzọ.)
e) Asambodo na akwụkwọ na-egosi ahụmịhe ma ọ bụ ahụmịhe ọkachamara chọrọ maka ọnọdụ ọ bụla na Ọnọdụ Pụrụ Iche (a ga-akwadebe asambodo na ndepụta nke akwụkwọ akọwapụtara dị ka otu akwụkwọ ma bulite na ngalaba 'Ozi Ndị Ọzọ' n'oge ngwa emere site na gọọmentị.)
MGBE IHE NDỊ MERE
N'ihi ule nke ngwa, ngụkọta pasent iri asaa nke KPSS akara (akara KPSS nke nwa akwukwo na-edoghị akara KPSS ma ọ bụ 70 dị ka 10) na pasent iri atọ nke akara asụsụ mba ọzọ (akara nke ndị na-enyeghị asambodo asụsụ mba ọzọ ga-ele anya dị ka ihe efu) Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke XNUMX (iri) maka aha ọ bụla ka a ga-akpọ gị ka ọ bụrụ nyocha ederede, na-amalite site na akara kachasị elu dabere na ogo ahụ.
Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu onye nwere otu akara nke ikpeazụ na ntuli aka a dị ka ọkwa a, a ga-anabata ndị niile chọrọ ntuli aka a maka nyocha ahụ.
Aha ndi choro imere ule edere ede https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB ga-eziga saịtị ahụ. Na mgbakwunye, ọ nweghị ọkwa ederede ma ọ bụ ọkwa ga-eme.
Ndị tinyere akwụkwọ nwere ike itinye n'ọrụ naanị otu n'ime ọkwa ekwuputara.
NKWUKWU EZI OBULA, OBI NA OBODO
Ajụjụ udomo oro ga-ekpuchi isiokwu niile akọwapụtara na teknuzu na ọnọdụ pụrụ iche nke ọnọdụ ha itinye. A ga-ekerịta ajụjụ 10 (iri) n'etiti ọkwa ekwuputara. Ajụjụ ndị a na-ajụkarị ga-ekpuchi isiokwu IT ugbu a.
Oge na ebe a na-enyocha ya na ndepụta nke ndị ruru eru ịga ule ule ahụ https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB ga-eziga saịtị ahụ.
Ndi tozuru oke inweta ule ederede dere nwere ike ịrịọ Mịnịstrị nke Ọrụ Ugbo na Oke Ọhịa nke Nhazi data n'ime ụbọchị atọ (X), gụnyere ụbọchị mbipụta, emesịrị ndepụta nke ndị tozuru iji nyochaa ule ahụ edepụtara. Agaghị anabata ajụjụ ọ bụla edereghị n'ime oge a kara aka. Kọmịshọnsị izu ga-emecha rụchaa ọrụ nyocha n'ime 3 (atọ) ụbọchị ọrụ. A ga-eme ka ndị na-ahụ maka nsonaazụ dee ya.
Ndi akwukwo ndi choro 100 na ndi ozo karia 70 akara ngosi zuru ezu na njedebe edemede https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB A ga-ekwuputa ndị ndọrọndọrọ 9 (iteghete) dị ebube, 9 (itoolu) dịka ndị mmeri.
A ga-enyefe akwụkwọ maka nyocha nke ule uda na Ngalaba IT n'ime 3 (ụbọchị atọ) ụbọchị ọrụ na-amalite site na ọkwa a ga-ekwuputara nsonaazụ nyocha ya na kọmiti nyocha na ụlọ ọrụ mahadum metụtara ya ma ọ bụ nzukọ.
Y’oburu na akara ndia di otu n’ule edere; Ọ bụrụ na oge ọfụma ndị ọkachamara dị ogologo na oge nke ahụmịhe ọkachamara ha nhata, a ga-atụle ụbọchị ngụsị akwụkwọ mahadum na-adịbeghị anya.
ANYA ANYA AKPANGWU EGO
Nsonaazụ nyocha https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB saịtị. Na mgbakwunye, ọ nweghị ọkwa ederede ma ọ bụ ọkwa ga-eme.
Ngalaba na-ahụ maka oke ohia na mmiri metụtara kwuru banyere nnukwu ọrụ
Ministri oru ugbo na oke ohia